राजधानीमा भएका ५ अत्यासलाग्दा गोलीकाण्ड, जमिम शाहदेखि शरद गौचनसम्म
काठमाडौं, २५ असोज- मिडिया उद्यमी जमिम शाहलाई लाजिम्पाटमा गोली हानी हत्या गर्दा काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थामाथि ठूलै चुनौती थपियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा भारतीय अन्डरवल्र्ड अपराधीको संलग्नता खुलेपछि प्रहरी झन् आत्तियो ।
अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ - ०६७ फागुन २६ मा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा रहेका युनुस अन्सारीमाथि हत्या प्रयास भयो । भारतीय नागरिक मनमित सिंह भाटियाले प्रहरीकै मिलेमतोमा हतियार लुकाएर लैजान सम्भव भएका थिए । नक्कली भारतीय नोटको तस्करीमा अन्सारीको मिलेमतो रहेको भन्दै उनको ‘सफाया’ गर्न भाटियालाई पैसा दिएर अन्डरवल्र्ड समूहले नेपाल पठाएको थियो । भाटियाले बयानमा अझै केही नेपाली निशानामा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
एकपछि अर्को हत्याकाण्ड मच्चिरहँदा राजधानीको सुरक्षा अवस्था यति कमजोर किन भयो ? प्रहरी परिचालनमा के-कस्तो कमजोरी भयो ? प्रदेश र संघको चुनावको मुखमै सर्वसाधारण आतंकित हुने गरी गराइएको यो आततायी घटनाले मुलुकको शान्ति-सुरक्षा कुन तहमा छ भन्ने छर्लंग पारेको छ । असोज २६, २०७४ मा प्रकाशित